Funda ulwimi lwesiTshayina ngale app eyenza izinto zibe lula | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ufunda njani isiTshayina ngeselula yakho nale app ye-Android
UManuel Ramirez | | Ukusetyenziswa kwe-Android
Ngabantu abangaphezulu kwe-1.200 yezigidigidi e China, Siyaqonda ukuba sifuna ukufunda isiTshayina kwiselfowuni yethu ye-Android. Ulwimi oluqinisekisa ukuba nakho ukufumana umsebenzi ngenxa yesakhono esikhulu esi sizwe esixabisekileyo, esiya sizibeka endaweni yaso njengamandla okuqala aphezulu kwezoqoqosho emhlabeni.
Ingxaki ngolwimi lwakho kukuba kufuneka funda ukusuka ekuqaleni kubalinganiswa bakho. Kwaye njengamaJapanAyisiyonto ilula leyo. Ngethamsanqa, sinoluvo lomphuhlisi ofuna ukukufundisa isiTshayina ngokufunda abalinganiswa baseTshayina ngohlelo lokusebenza olubizwa ngokuba yiCharacter Trainer Chinese.
1 Inkqubo yeprimiyamu yokufunda isiTshayina
2 Uhlelo lokusebenza oluhlelwe kakuhle
Inkqubo yeprimiyamu yokufunda isiTshayina
Njalo kwiminyaka edlulileyo Yonke into esuka e-China yayiqhagamshelwe njengexabiso eliphantsi kwaye ngaphandle komgangatho omninzi. Kodwa izinto zitshintshile kule minyaka idlulileyo ndibulela kwiimpawu ezinkulu ezibonisa ukuba kunelaphu elingaphezulu kunelokusika kunokuba lalibonakala ngathi beli lizwe.
Sithetha ngokucacileyo malunga neempawu ezinje UXiaomi noHuawei abavule amehlo kwizigidi zabantu ukubonisa ukuba ngemali encinci unokuba namava ngeefowuni eziphathwayo kunye nesiphelo esiphakamileyo sezinye iimveliso zasentshona. Masithi bavule indlela yabaninzi yokususa uloyiko lwabo kwaye baqala ukuzama neempawu zeemoto ezazingaziwa apha, kodwa ngokuthe ngcembe baqala ukukhala ngexabiso labo lemali.
Ukuba i-China iyanda, kunjalo ke nangolwimi lwayo, kunjalo Umqeqeshi woBuntu baseTshayina unokuba sisixhobo esibalulekileyo ukufunda abalinganiswa baseTshayina okanye imiqondiso. Ukuba siyakhumbula ukuba le app yomdlalo ivela kwi-USM, umpapashi osemva kokulungiswa kwemidlalo yebhodi yeCatan kunye neKahuna, sinokuqonda ukuba kuninzi ngakumbi ngasemva kwalo mdlalo ubizwa ngokuba nguCharacter Trainer waseTshayina.
Kwaye ayingomdlalo ngokwenene, ingaphezulu kwe- i-app yokufunda oonotsheluza. Injongo yayo kukufundisa oonobumba baseTshayina ukuze basilungiselele ngcono abo bafuna ukufunda okanye ukuthetha ngolwimi lwabo. Indlela efanelekileyo yokuqalisa uhambo lwethu kwisifundo samaTshayina.
Uhlelo lokusebenza oluhlelwe kakuhle
Inkqubo yokuQeqesha abalinganiswa baseTshayina yile eyahlukileyo kwaye iya kukufundisa ukukhumbula iileta, intsingiselo kunye nokubiza amagama kungekudala. Ukuchitha ixesha kunye neeleta zaseTshayina.
Le khosi yokufunda enzulu yaseTshayina yenziwe ngentsebenziswano neConfucius Institute eMunich kwaye ikukhokele inyathelo nenyathelo ukuze ufumane ukuqonda okuqinileyo kwesigama esisisiseko ngee-analogies, izikweko, kunye nezixhobo ezibonakalayo. Oko kukuthi, ibeka yonke into kwisitya ukuze ngokuzama kancinci kwinxalenye yakho, ufunde olu lwimi lobunzima obunjalo, kodwa inokukuvulela iingcango ezininzi zobungcali; enyanisweni kunzima ukufumana abantu abathetha isiTshayina nolunye ulwimi, ke musa ukuchitha ixesha lakho.
Ukufunda ngokukuko kwabalinganiswa abangama-288 Iilwimi eziphambili ngoncedo lombutho.
Amagama, intsingiselo, ukubiza amagama kunye nokukhuphela kulula ukukhumbula.
Inkqubo yokufunda ekhuthazayo yenkqubela phambili ekhawulezileyo.
Ngokusekwe kwi- ukuqonda kwale mihla kunye nolwazi olushukumisayo lwengqondo, kunye namanqanaba okulungiswa kwethiyori.
Ejolise ngqo kwimixholo ye-HSK yenqanaba 1 kunye ne-2 yeemviwo.
Insiza efanelekileyo yokufunda, ishishini kunye nokuhamba.
Kuba i-app yeprimiyamu, uMqeqeshi wesiTshayina ikuvumela ukuba ufikelele kumava onke ngaphandle kwentengiso kunye naluphi na uhlobo lwe-micropayment, ke iya kuba ngumdlalo weapps ofanelekileyo wokufunda olu lwimi. Ke ukuba ubukhangela uncedo olongezelelekileyo kule khosi yaseTshayina uyinikayo okanye uza kuhamba nje uye kwilizwe, yenye yeziapps zibalulekileyo. Unayo kwiVenkile yokudlala kaGoogle ye- € 2,79 yokuqalisa kwilizwe liphela njenge China.
Umfanekiso ngo-Myriam Zilles.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ufunda njani isiTshayina ngeselula yakho nale app ye-Android
Kuvuza ezinye iinkcukacha ze-Asus ROG Ifowuni 2 nguTENAA: 5800 mAh ibhetri emehlweni